कोइलाडी फाइनलमा प्रवेश
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित गजेन्द्र नारायण सिंह स्मृति टी २० क्रिकेट प्रतियोगिताको फइनलमा वडा नं. ४ कोइलाडी प्रवेश गरेको छ । सोमबार सम्पन्न खेलमा कोइलाडीले वडा नं. २ लौनियाँलाई ३० रनले पराजित गर्दै फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो ।
मौसमका कारण १३ ओभरमा छोट्याइएको पहिलो खेलमा टस जितेर ब्याट्रि गर्दै कोइलाडीले ७ विकेटको नोक्सानीमा ७५ रन बनाएको थियो । जसमा जितेन्द्र पासमानले सार्वधिक १८, रिषभ सिंहले १३ तथा जुगनु मण्डलले १२ रनको योगदान दिएका थिए । लौनियाँका लागि दिनेश कुमार मण्डलले सर्वाधिक ३ विकेट, शिव सुन्दर मण्डलले २ तथा अजय मण्डल र दिलीप मण्डलले १÷१ विकेट लिए ।
७६ रनको बिजयी लक्ष्य पछ्याएको लौनियाँ १२ ओभर २ बलमा सबै विकेट गुमाई ४५ रन मात्र बनाउन सफल भयो । लौनियाँका भगवानदेव मण्डलले अविजित रहँदै २५ रन बनाउनु बाहेक कुनै पनि खेलाडि दोहोरो अंकमा प्रवेश गर्न सकेनन् ।
कोइलाडीकालागि जुगनु मण्डलले घातक बलिङ गर्दै ३ ओभरमा ८ रन खर्चेर ४ विकेट लिए भने जयराम मण्डलले २ तथा अक्षय मण्डलले १ विकेट लिए । उक्त खेलमा कोइलाडीका जुगनु मण्डललाई गाउँपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत तथा प्रतियोगिता संयोजक राजेश कुमार झाले म्यान अफ द म्याच ट्रफी प्रदान गरे ।
यस्तै सोमबारै सम्पन्न दोस्रो खेलमा वडा नं. ३ सकरपुराले वडा नं.७ मन्सापुरलाई ६५ रनले पराजित गरेको छ । टस जितेर ब्याटिङ गरेको वडा नं. ३ सकरपुराले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाई १३२ रन बनाएको थियो । जसमा अमित मण्डलले विष्फोटक ब्याटिङ गर्दै ७ चौकाको मद्तले ४७ बलमा ६३ रन बनाएका थिए । मन्सापुरका लागि सुबोध मण्डलले २ तथा अजय मरिक र धिरज मण्डलले १÷१ विकेट लिए ।
१ सय ३३ रनको लक्ष्य पाएको मन्सापुरले १६ ओभर ४ बलमा सबै विकेट गुमाई ६७ रन मात्र बनाउन सकेको थियो । मन्सापुरका लागि रोशन मण्डल र महेश मण्डलले समान १६÷१६ रन तथाउमेश मालीले १० रन बनाउनु बाहेक कुनै पनि खेलाडी दोहोरो अंक मा प्रवेश गर्न सकेनन् । सकरपुराकालागि श्यामदेव मण्डल र प्रदीप मण्डलले समान ३÷३ विकेट लिए भने सुरज मण्डलले १विकेट लिए । उक्त खेलमा सकरपुराका प्रदीप मण्डललाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिश कुमार सिंहले म्यान अफ द म्याच ट्रफी प्रदान गरे ।